Iintaba Retreat For A Couple King Bed/Ensuite
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguGary
OLU LUDWE LWESIBINI K IBEDROOM & SPA IBHAFU EYINTLOKO YESIBINI.
ZONKE IINDAWO ZOKUHLALA IYAFUMANEKA .
Wamkelekile kwenye yezona dilesi zabucala ezizodwa kwi Lower Blue Mountains.
Ime esiphelweni se-cul de sac, iindawo zokuhlala zijongene ne-N/E ejonge echibini kunye nendawo yomgangatho, umthi ogcwele umphezulu kunye nesibhakabhaka sesixeko!
Iigadi ezintle kunye neendawo ezinengca zijikeleze le ndawo yokuzifihla ingumona wabaninzi!
Phulaphula iintaka, yaye usenokuyibona ikhangaru njengoko ujonge ngeefestile.
Ke akukho siphithiphithi esi sithuba licandelo eliphezulu le-Avery enkulu yenqanaba lokuhlala.
Mna nomfazi wam uKaren sihlala kwindawo engaphantsi enezimfihlo zayo.
Yahlula intendelezo yokungena yabucala apho unokuhlala khona kwaye umamele iintaka zemveli, usele iglasi yewayini, okanye ubambe incwadi kwaye uphumle.
Ehlotyeni yiza uzonwabele ichibi le-14m elinobumfihlo obuninzi kwaye ukhanyise i-barbie yosuku oluhle.
Ebusika ujabulele ukufudumala kwegesi yendalo yokufudumala, ngelixa uthatha i-ambiance yasebusika ezintabeni.
Zonke iibhedi zineengubo zombane zokukugcina ushushu kobo busuku bubandayo, bubandayo.
Iindawo ezimbini ze-Smart TV ezinokufikelela kwi-intanethi kunye nee -apps ezininzi zokuzonwabisa kwakho.
Qaphela: intonga yeGoogie Smart eneGoogie TV efakwe koomabonakude bobabini.
Yiza nemirhumo yakho yeTV ehlawulweyo ukuze ufikelele kuzo zonke iinkqubo zakho ozithandayo.
Ikhitshi eligcweleyo elinesidlo sakusasa selizwekazi linikezelwe.
Impahla yokuhlamba impahla.
Ukufikelela kwisikhululo seenqwelomoya yi-77kms app 1 hrs drive.
Oodade aba-3 baseKatoomba sisiqingatha seyure benyuka intaba.
Iintaba ezinqabileyo zaseLeura zizele ziindawo zokutyela ezinkulu, iikhefi kunye neevenkile ezizodwa ezikwi-25 mins kude.
I-Red Hands Cave Walking Track kwi-Blue Mountains National Park inika umzobo onomtsalane we-Aboriginal stencil ngepikiniki kunye nokubukela iintaka kufutshane neGlenbrook.
Ingoma ye-Overcliff-Undercliff e-Wentworth Falls idibanisa iinduli ezibukekayo kunye nehlathi elinemvula elinemizila yokuhamba kunye neengxangxasi.
Ukungena epakini mahala.
Ixesha 1-2 iiyure
I-Conservation Hut e-Wentworth Falls luhambo oluhle kwaye ume ukuze utye.
I-Nepean Lookout ineembono ezintle zomlambo phezu kweFairlight Gorge, eneentyantyambo zasendle ezintle zokuzibona xa usendleleni.
55" HDTV ene-izitishi zeTV eziqhelekileyo, I-Chromecast, I-Netflix
4.33 ·Izimvo eziyi-6
I-Mt Riverview yindawo encinci ethandekayo kwiiNtaba zeBlue kwaye kuphela i-15 min drive ukuya kwi-Sydney International Rowing Regatta. Iivenkile kunye nenkundla yentenetya yasekuhlaleni yi-300 mtrs phezulu kwendlela. IGlenbrook inelali eqhelekileyo kwaye ikumgama oyi-8 min kuphela xa uhamba neendawo zokutyela ezinkulu kunye neevenkile zezipho. Kwakhona iziko lolwazi lokhenketho elimangalisayo libekwe kanye kuhola wendlela oMkhulu waseNtshona eGlenbrook.
Ukuba uthanda ukuhamba ngeenyawo okanye ukukhwela iibhayisekile entabeni ke iPaki yeSizwe yaseGlenbrook iyimfuneko. Umkhondo wokuhamba we-Blue Pool ukhokelela kumngxunya ongaqhelekanga wokuqubha kwindawo ezolileyo yehlathi. Ifumaneka kwindawo yaseGlenbrook yeBlue Mountains National Park, luhambo losuku olufanelekileyo lweentsapho okanye abahlobo abafuna usuku lokuphumla, kude nesixeko.
xa ubaleka imfihlo ethile ibalulekile . le ndawo ibucala kakhulu.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-9450
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$718
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mount Riverview